Home Wararka Rooble iyo saaxibadiisa oo dhaqaale ku bixinaya dagaal ka dhan ah Lafta...
Rooble iyo saaxibadiisa oo dhaqaale ku bixinaya dagaal ka dhan ah Lafta Gareen
RW Rooble iyo saaxibadiisa oo ay hogaaminayaan Cabdiraxman Al Cadaala ayaa bilaabay dagaal toos ah oo ka dhan ah Lafta Gareen iyo maamulkiisa. Sida MOL loo xaqiijiyay RW Rooble ayaa dhaqaale ku bixinaya sidii warbaahinta loogala dagaali lagaa Lafata Gareen.
Xalay iyo maanta waxaa warbaahinta ka soo muuqanayay shaqsiyaadg dhaqaale lagu simyay in ay aflagaadeeyaan Lafta garden, kuna eedeeyaan in uu dib ka galay shacabka reer Koonfur Galbeed.
Rooble ayaa xalay kulan gaar ah la qaatay Xubno ka mid ah Baarlamaanka 11aad ee dhawaan lasoo doortay.kuwaasi oo ay ka mid yihiin mas’uuliyiin u taagan guddoonka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Maxamed Xuseen Rooble Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay qaabilay Guddoomiyihii hore Baarlamaanka Xildhibaan Aadan Madoobe iyo Shariif Maxamed Cabdalla oo labaduba ah Musharax Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Mas’uuliyiinta uu la kulmay Rooble ayaa kana haa saddex Xildhibaan oo ka soo jeeda Koofur Galbeed oo qaatay shahaadada Xildhibaannimo.
Previous articleHir-Shabeelle oo maanta diiwaangelinaya musharixiinta u tartameysa HOP#024, HOP#106 & HOP#140
Next articleBeesha Caalamka oo bilaawday da’daalo xal loogu raadinayo khilaafka doorashada
Gen Odawaa oo war ka soo saaray xasuuqii Gololey ee lagu...